Abadali be-GIF abaphambili abahlanu - uLucidPix
Muva nje ama-GIF abesenza ukubuya ngokuthandwa, futhi ngalokhu kudumile, uzodinga amathuluzi afanele ukuze awadale. Ukuthi ama-memes acwebile noma amnandi nje ngezithombe, ukwenza ama-GIF akufuneki kube yinselele. Siphula ukukhetha kwethu kwabadali be-GIF abaphambili abahlanu ukukusiza usike imfuhlumfuhlu futhi wenze ama-GIF amahle kakhulu.
Isenzi samahhala se-GIF
Isenzi samahhala se-GIF inikeza amandla okuyisisekelo adingeka kumenzi we-GIF. Kukunika amandla okuguqula izithombe noma amavidiyo abe yi-GIF, enezinketho eziningi ongaziguqula. Ngemuva kokufunda ukusebenzisa uhlelo lokusebenza, esithole ukuthi luyinselele kancane, ungalisebenzisela ukudala okuyisisekelo kwe-GIF. Inamandla okuguqula izingxenye zevidiyo ye-YouTube ibe yi-GIF, ezingaba wusizo. Sekukonke, inezisekelo ozidingayo, azinzima ngokweqile, futhi zinamathuluzi alula okukusiza ukudala i-GIF oyithandayo.
I-LucidPix uhlelo lokusebenza lwanoma iyiphi i-smartphone enika abasebenzisi amandla okwenza, ukuhlela nokwaba umhlaba njengoba bebona, ngezithombe ze-3D. Inamandla okuthola okusheshayo, okulula, futhi GIFs obukeka ngokumangazayo.
KuLucidPix, kukhona ongakukhetha ukwenza noma isiphi isithombe osikhethayo kwi-GIF egqwayizayo. Ukuthepha okukodwa kukuvumela ukuthi wabelane ngaleyo GIF nanoma yimuphi umuntu ngezinhlelo zokusebenza zemiyalezo, i-imeyili, njll, noma kunoma iyiphi ipulatifomu yezokuxhumana.
Inqubo yokudala ye-GIF ilula futhi iphumela ezithombeni ezicacile ezihambayo. Ngamandla okwenza i-GIFs emangalisayo kanye nenketho yokuyithatha i-notch futhi wenze izithombe ze-3D zibe ngama-GIF enezithombe, lolu hlelo lokusebenza luyisengezo esihle ku-smartphone yakho.
Abasebenzisi bangenza ngezifiso i-GIF yabo ye-3D ngezihlungi ezifana ne-VCSO, amafreyimu we-3D, kanye umbhalo ngokwezifiso we-3D. Ngaphezu kwalokho, lapho uthumela ku-GIF ungazikhetha Ijubane lokunyakaza le-3D nesitayela ukufanisa isithombe sakho kangcono.
Ukudalwa okulula kwe-GIF okwenziwe eLucidPix
I-EZGIF inikeza amandla okudala ngenani elihle lezinketho zokudala ze-GIF. Kukhona inani elikhulu lewebhusayithi engaba khona njengoba inenani elikhulu kakhulu lamathuluzi kunoma yimuphi umakhi we-GIF. Angicabangi ukuthi noma ngubani ubedala amathuluzi abo njenge-EZGIF futhi banesisekelo esiqinile ukwakha kusuka kuso. Sithole ezinye izingqinamba zokusebenza kokukhethwa kukho okuthuthukile, kepha wonke amathuluzi ayisisekelo asebenza njenge-charm. Kukhona izinsiza zokuxazulula izinkinga, ngakho-ke kuyacaca ukuthi lolu hlelo lokusebenza ngukuqhubeka komsebenzi. Silindele ukuvumelana okuthe xaxa njengoba lolu hlelo lokusebenza lukhula futhi balungisa ezinye zezinkinga ngamathuluzi abo.
I-Image Flip Meme Generator
I-Flip yesithombe iqine kakhulu, inesipiliyoni somsebenzisi esingaguquki namafomethi amaningi enziwe we-GIF. Bathathe inkululeko yokuqamba izakhiwo ezisetshenziswa kakhulu kuma-GIFs, ngakho-ke uhlelo lokusebenza kulula ukuyisebenzisa. Iwebhusayithi futhi ifaka izithombe ezisetshenziswa kakhulu zememes kanye nama-GIF. Lokhu kuphatha amakhono amaningi ongawathinta ngaphandle kokufaka umzamo omkhulu noma umcabango, ngenkathi unomphumela oqinile kukhwalithi ye-GIF yakho. Izithombe I-Flip zikhawulelwe ekunikezelweni kwamathuluzi, kepha asitholanga glitches noma izindawo ezinkulu okufanele zithinteke ngewebhusayithi. Kusetshenziswa okuhle uma ufuna ukwakheka okulula okuningana nemininingwane emincane ofisa ukuyengeza ku-GIF yakho.
Abahleli bezithombe eziku-inthanethi
Abahleli bezithombe eziku-inthanethi inamathuluzi amaningi wokuhlela izithombe asebenza kahle. Iwebhusayithi futhi inesimo esibonakalayo esihle somsebenzisi, ikwenza kusheshe futhi kube buhlungu ukufunda. Amathuluzi amaningi enza njengoba ecatshangwe ukuthi awenzi umzamo omncane. Ukusebenziseka kalula kushesha kakhulu ukuthola ukuthi uyakwazi ukusebenzisa amathuluzi abo. Abaphuthelwa indawo lapho kukhulunywa ngamathuluzi wabo wokuhlela umbhalo nezithombe. Zikunikeza inketho yokwenza noma izinguquko ezilula kuzithombe zakho noma ividiyo, kanye nemiphumela ethuthukisiwe kanye nezithombe, ukubanikeza ukusebenza okuqine kakhulu komqambi we-GIF.